Ukubuyiselwa kweMarsh eLouisiana ngemuva kweBP Spill Eholwa ngu-Ellicott Dredges
I-Lake Hermitage Marsh Creation - I-NRDA mapema Ukuvuselela Iphrojekthi ibandakanya ukwakhiwa komklamo ngaphansi kwephrojekthi eyaziwa ngokuthi yi- "Lake Hermitage Marsh Creation Project" eyenzelwe futhi yaxhaswa ngoHlelo lweCoastal Wetlands Planning ,vikelwa nokuvuselela (i-CWPPRA). Le projekthi ithatha indawo ecishe ibe ngamahektare angama-104 wama-marsh brake ama-acres acishe abe yi-5-6 amahektare obumba obekungenziwa ukuthi wawakhiwe ngaphakathi komngcele wephrojekthi weCWPPRA.
I-Lake Hermitage Marsh Creation - I-NRDA Early Reform Project izokwakha cishe amahektare angama-104 ebangeni lama-brackish marsh esikhundleni sezindawo ezingama-7,300 ezilandelanayo ezinyangeni zamashubhu obumba afakwe ekwakhiweni kokugcina kwephrojekthi ye-CWPPRA eyisisekelo. Le ndawo eyengeziwe yemashi izokwakhiwa ngokuphelele ngaphakathi komngcele wethala lephrojekthi weCWPPRA. I-Sediment izothunyelwa emanzini ngokweqile endaweni ebolekayo eMfuleni iMississippi, iphinde ipayishwe ngepayipi ukuze kwenziwe umashi omusha endaweni yephrojekthi. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuncipha kwemvelo kanye nokuhlangana kokudonsela phansi okuncishisiwe kufanele kuholele ekuphakameni ngaphakathi kobubanzi bezinto ezibandayo ezingaba nomthelela ekusungulweni komswakama osafufusa. Indawo yokugcwalisa i-104-acre izotshalwa nezitshalo zomdabu zemvelo ukusheshisa izinzuzo ezizotholwa kulo msebenzi.
I-Lake Hermitage Marsh Creation - I-NRDA Early Regency Project itholakala ngaphakathi kweBarataria Hydrologic Basin ePlaquemines Parish, eLouisiana, entshonalanga nomphakathi wasePointe a la Hache, nasenyakatho nentshonalanga yomphakathi waseMagnolia. Lesi sigaxa sikhonjwe njengendawo ebaluleke kakhulu ekubuyiselweni kogu, futhi besilokhu sigxile kakhulu ekutadisheni kabanzi nasekubunjweni kwamaphrojekthi nasekuqalisweni.